Fire ize ndụ map kere Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Map nke ihe egwu oku na Spain
Monica sanchez | | Ihe
Otu n’ime nsogbu obodo anyị kwesiri iwere n’afọ ọ bụla bụ ọkụ ọgbụgba. Dabere na NGO WWF Spain, a na-emepụta nkezi nke 16500 kwa afọ, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% bụ ụmụ mmadụ.
Ndị nyocha si CSIC, Mahadum Lleida na Mahadum Alcalá, kere a ọkụ ihe ize ndụ map nke ị nwere ike ịnwe atụmatụ e mere atụmatụ nke obodo ga-abụkarị ihe ọghọm.
Maapụ a bụ nsonaazụ nke nyochachara data nke ihe karịrị puku obodo isii na mpaghara buru ibu (Naanị na Canary akipelago na Navarra bụ ndị na-enweghị maka enweghị data zuru oke) n'etiti 1988 na 2000. Ndị ọkà mmụta sayensị jiri 60% nke ozi enwetara iji dozie ihe nlereanya ahụ, na 40% iji nyochaa ya; na ihe nile enwetara ntụkwasị obi dị ịtụnanya: 85%.
Ebe kachasị dị egwu bụ ebe ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ n'oge ọkọchị, dịka na mpaghara Mediterenian, akụkụ dị iche iche nke ime na ọkachasị na Galicia.
Ọ bụ ezie na ụmụ mmadụ na-akpata oke ọkụ kwa afọ, ndị ọrụ nyocha a anaghị elebara ihe a anya. Otú ọ dị, Ikwesiri ima na onwere ndi n’enweghi oru ha na-ahu oku dika ohere oru; nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị mere anyị ga-eji hụ ka ọdachi ndị a si eme.
Ọkụ bụ ihe okike na usoro okike, ka ha na-edozi ya. Mana dịka ọ dị n'ihe niile, oke oke bụ ihe na-emerụ ahụ na ekwesighi ibute n'ihi na mgbe nke ahụ mere, dịka WWF si kwuo, 60% nke mpaghara emetụtara ọkụ. Na nke ahụ nwere ike ịpụta hekta ọhịa gbara ọkụ na nsonaazụ ikuku carbon dioxide na ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Map nke ihe egwu oku na Spain
Mba nke ụwa na-alụ ọgụ ọkọchị